Oké ifufe na-egbu egbu na-agbasa ọdachi na Mozambique, Malawi na Zimbabwe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Oké ifufe na-egbu egbu na-agbasa ọdachi na Mozambique, Malawi na Zimbabwe
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ gbasara Malawi • Akụkọ kacha ọhụrụ na Mozambique • News • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zimbabwe
Mozambique na Malawi nwere oke ikuku mmiri ozuzo Idai gburu ihe karịrị otu narị mmadụ. Oké ifufe ahụ dara na etiti Mozambique n'abalị Tọzdee.
Idai Tropical Cyclone Idai na-ewepu nde 1.5 gafee Mozambique na Malawi, ka UN na-azaghachi nzaghachi.
Oke mmiri ozuzo na ikuku nke ruru ihe dịka 200 km na elekere kụrụ Beira, obodo ukwu dị n'ụsọ oké osimiri. Beira, nke dị n’etiti ọdụ ụgbọ mmiri nke Mozambique bụ ahụmịhe maka onye njem njem nwere mmasi. Ọ dị n'ọnụ ọnụ Rio Púnguè ma bụrụkwa nnukwu ahịa azụmaahịa maka mba ndị na-enweghị mmiri dị ka Botswana na Zimbabwe.
Agbanyeghị mpaghara anọ dị na Zimbabwe ka a ga-emetụta n'ụzọ dị njọ ebe okpomọkụ na-atụ anya ime ka ọdịda na Sọnde.
Central Okirikiri ala cyclone egbu egbu Ọdachi atụ anya ya see igwe narị okowot km nke enweghị mmiri Malawi Mozambique fọrọ nke nta abalị n'ọdụ ụgbọ mmiri anāchi achi mmiri ozuzo nzaghachi Rio oké ifufe trading njem ebe okpomọkụ UN ifufe Zimbabwe